Accountka Harawo Oo Daawaha Kusocda - Cakaara News
Accountka Harawo Oo Daawaha Kusocda
Jigjiga ( Cakaaranews ) Arbaco, 9ka march 2016. degmada harawo, galxamur, boqolmaayo, goglo, shabeelay, ceel-ogaadeen, m.m.qabribayax iyo waliba m.m.wajaale, gobolka dhaawa, iyo gobolka sitti ayaa kamid ah degmooyinka, maamul-magaalooyinka iyo gobolada accountgoodu daawaha kusocdo.
Qurbajoogta kasoo jeeda degmada harawo ayaa marka ay xukuumadu ubaxdo wadamada qurbaha ah waxay kamid yihiin dadka ugu daf-dafta badan ee lamaqlo iyagoo dhahaya ‘‘harawo ama dharwanaaje ayaan kasoo jeednaa’’ balse maanta accountkii degmada harawo ee health centerka iyo dugsiga daawaha ayuu kusocdaa. Shacabka reer harawo ee qaran joogta ah ayaana kaxanaaqsan foodhida accountka.
Waxaaba kasii daran, accountka degmooyinka qurajoogta kasoo jeeda gobolka Sitti oo horay udhihi jirtay ‘real estate baan dhisaynaa’ ayaa markii layidhi health center iyo dugsi usoo dhisa degmooyinka cusub ee gobolka oo ay running costga dawladu bixinayso ayaa shir ay yeesheen mudo 3 bari ah kadib waxay accountka kusoo shubeen 50 dollar.
Sdioo kale, qurajoogta gobolka dhaawa oo sheegayay inay kufaraxsan yihiin gobolka cusub iyo degmada qadhaadhumo ayaa kadib markay lacag noqotay lagu dhiso health centerka iyo dugsiga yidhi ‘‘anagu magaranayno’’oo dafiraad keenay. Taas oo kaxanaajisay shacabka qaran joogta ah ee kasoo jeeda gobolka iyo degmadaba oo leh anagaa dhisayna balse dawladu way kadiiday maadaama oo qurbajoogta lagu kala saarayo.
Gobolka Liibaan iyo degmada boqolmaayo iyaga xisaabtaba hakudarin. Xataa soo hadal qaad malaha. In loo maqan yahayna mafilayno. Balse, war aan xaqiiqadiisa lahubin ayaa tibaaxaya in nin England jooga uu accountka kuriday 6 doolar oo udhiganta in kayar 200 oo birr.
Oohinta, ilmada iyo baroorta kadhacaysa accountka degmada Galxamur ayaa waxay indhuhu lacasaadeen shacabka reer bookh. Arintan ayaana ah sheekada ugu hadal hayska badan ee taala magaalada jigjiga.
Degmada kudunbuur ayaa iyada wuxuu shaki kujiraa inay kamid tahay gobolka qoraxey iyo in kale. Degmada kudunbuur iyo degmada Shabeelay ayaana noqonaya degmooyinka ugu taageero hooseeya. In kasta oo degmada Shabeelay ay kahorayso degmada kudunbuur.
Degmada Ceel-ogaadeen iyada wax sheegta oo qurbajoog ah waa lala’yahay ilaa hada. Xataa wax teleefan soo diray oo kahadlaya degmada majiro.
Waxaase layaab iyo yax-yax mudan oo ilaa hada meel ay jaan iyo cidhib-dhigeen lala’yahay qurbajoogta kasoo jeeday degmooyinka gobolka afdheer ee God-god iyo Qooxle. Habayaraatee, wali wax accountkooda kusoo dhacay iyo cid shirkada kala soo xidhiidhay toona majiraan. Waa sida uu xisaabiyaha shirkadu usheegay shabakada Cakaaranews. Waxaaba la is waydiinayaa wax qurbajoog ah oo kasoo jeeda malaha miyaa.
Dhanka kale, accountka maamulka magaalada qabribayax madhnidiisa ayay qaxootigu kafadhi la’yihiin iyadoo qayladiisuna buuraha gurayska gaadhay. hal shaqsi ah oo qurbajoog ah oo wali kahadlayna majiro.
Maamulka magaalada wajaale isaga haba-sheegin. Wuxuuna noqday maamulka magaalda ugu taageeraha yar. Accountkeeduna wuu qiiqayaa. Daawaha ayuuna kusocdaa.